Palestina: “Tsy fantatr’izy ireo hoe ho velona ve izy ireo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2019 4:14 GMT
Mitohy ao anatin'ny alina faha-17 ny ady ao Gaza. Hitako aho fa maniry mafy ny andro izay tsy hahatsapako ho manana adidy intsony hitantara ity toe-javatra ity. Toa nahantona hiandry ny fiainana; any am-piasana, any an-trano, eo am-pisakafoana, rehefa manoratra, toa mahatsapa fa miandry fotsiny ny hifaranan'izany aho, mba hahafahako mamela ny tenako hivoaka indray, na hatory fotsiny. Hevitra toa fitiavan-tena izany raha ao Gaza, miandry izany mba hifarana ihany koa izy ireo fa angamba mba ho afaka hiverina amin'ny fiainana tsy misy tahotry ny fahafatesana tonga alohan'ny fofonaina manaraka.
Izany no nahatonga an'i Mohammad, monina ao Ramallah saingy avy any Gaza, nanomboka ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe “Mahazatra kokoa noho ny torimaso ny fahafatesana” Nandritra ny 17 andro, hatramin'ny nanombohan'ny fanafihana voalohany tao Gaza, nizara ny antson'ny fianakaviana ao amin'ny KABOBfest i Mohammad mba hahafahan'izao tontolo izao mandre ny tantarany.
Mahita ny fiainana any Gaza miha-ratsy kokoa hatrany ny famakiana ny tantara isan'andro. Tamin'ny lahatsoratr'i Mohammad omaly, nampahatsiahy antsika izy fa vao maika loza tsy araka ny tsikaritry ny ankamaroantsika ny ratsy mitranga:
Miha-ifantohana ny fijalian'ny Palestiniana isaky ny manao fanafihana goavana i Isiraely. Saingy nampahatsiahy ahy tamin'ny alina lasa teo ny rahalahiko any Gaza fa efa teo foana ny fijaliana, fa nanjary neken'ireo izay tsy miaina izany tsy tapaka. Talohan'ity famonoana ity, zara raha niaina ny mponina ao Gaza noho ny fahirano nahatsiravina izay nanidy ny tany, ny ranomasina ary ny rivotra, ka nanakana ny fidiran'ireo akora fototra sy fitaovana, sakafo ary fanafody, ka nahatonga ny 97% ny orinasa ao Gaza hikatona.
Ary tamin'ny alina lasa teo, namoaka ity avy any amin'ny filamindaminan-dratsin'i Ramallah, ao amin'ny Morondrano Andrefana i Mohammad:
Efa lasa ny tamin'ny 3 sasany maraina eto, nofohazin'ny antso mangatsiaka avy any libya aho. rehefa napetraka ny finday, dia nahatsikaritra hafatra avy amin'ny areej vadin'ny dadatoako mohammad: tonga eto aminay ny fiara mifono vy, misy setroka ato an-trano, mivavaha ho anay azafady.
Nantsoiko izy. Nandre fipoahana tany ivelany aho, ary tifitra basy tafondro. talohan'ny tamin'ny 2 ora maraina, tafiditra tao amin'ny faritra iray ivelan'ny tal al-hawa, akaikin'ny oniversite ireo fiara mifono vy sy ny tafika manokana isiraeliana. Tonga tsy nampoizina manoloana ny fanoherana mahery vaika sy mahery vaika izy ireo. fiara mifono vy mandoro ny manodidina azy rehetra. bala fôsifôro fotsy ampiasaina handrakofana fisintahana. Feno setroka ny trano manontolo, mitsangana ny ankizy, mitabataba. Toa misy ny fialàna tanteraka, saingy miandry ny ratsy indrindra izy ireo. milaza izy ireo mba hivavaka hatrany ho fiarovana azy ireo sy ho fifaharana. Tsy fantany raha ho velona izy ireo.